Madaxweyne Putin oo booqasho Khamiista ku tagi doono dalka Austria | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Madaxweyne Putin oo booqasho Khamiista ku tagi doono dalka Austria
Madaxweyne Putin oo booqasho Khamiista ku tagi doono dalka Austria
Russian President Vladimir Putin (R) meets with Austrian Chancellor Sebastian Kurz at the Kremlin in Moscow on February 28, 2018. / AFP PHOTO / POOL / GRIGORY DUKOR (Photo credit should read GRIGORY DUKOR/AFP/Getty Images)
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqonaya magaalada Vienna ee dalka Austria maalinta khamiista ee todobaadka nasoo aadan, Booqashadani ayaa lagu tilmaamay tii ugu horreeysay oo uu ku tago wadan katirsan Reer Galbeedka.
Austria, oo ah dal dhexdhexaad ah, ayaa kamid ahaa dalalka fara ku tiriska ah ee aan weli Danjiraheeda kala bixin magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka.
Ruushka iyo wadamada Reer Galbeedka ayaanan isku wanaagsanayn taniyo markii sida la sheegay la sumeeyay nin lagu magacaabo Sergei Skripal Basaas oo horeu uga tirsanaan jiray dalka Ruushka kaas oo ku dhintay gudaha dalka Britain.
Madaxweynaha dalka Austria Sebastian Kurz ayaa sheegay in Austria ay doonayso in ay dhexdhexaadiso Ruushka iyo reer galbeedka.
Waxaa lagu soo waramayaa in munaasabado la damacsan yahay in lagu soo dhoweeyno loogu diyaar garoobayo taasi oo la doonayo in lagu martiqaado Vladimir Putin marka uu ka tago garoonka caalamiga ee magaalada Vienna ee xarunta dalka Austria.
Austria ayaa horey u taageertay cunoqabateeynta ay dalalka Yurub ayideen in lagu soo rogo dalka Ruushka.
Madaxweynaha dalka Austria Sebastian Kurz ayaa u sheegay warbaahinta dalka Ruushka in uu doonayo in Austria ay dhexdhexaadiso xukuumadda Moscow iyo reer galbeedka.
Taageerada Mr Kurz ee cunaqabataynta waa mid iska cad, balse xisbiga ay isbahaysiga leeyihiin ee right Freedom Party ayaa sheegay in la qaado cunaqabataynta Ruushka lagu soo rogay.
Madaxa xisbiga xorriyadda, Heinz Christian ayaa socdaal ku tagay Ruushka muddo haatan laga joogo labo sanadood si uu qalinka ugu duugo heshiis iskaashi oo ay la sameeyaan aqalka Kremlin-ka ee looga taliyo dalka Ruushka.
Previous articleMaleeshiyada Shabaab oo qasaare xoogan lagu gaarsiiyay dagaal ka dhacay Gedo
Next articleKhasaaraha dhimashada muhaajiriinta ay dooni kula quustay Tuniisiya oo korortay